Ingabe Uyakudinga Ukuba Senkolweni Ehleliwe? | Okushiwo IBhayibheli
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBhunu IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiThai IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
UMA ubulokhu udidekile ngokuba senkolweni ehleliwe noma wazitshela ukuthi ayibalulekile, awuwedwa. Empeleni, iningi labantu abakhetha ukungabi amalungu enkolo ehleliwe landa ngokushesha.
Abanye baye bazishiya izinkolo ezihleliwe ngoba bakholelwa ukuthi izinhlangano ezinjalo zikhiqiza ubuzenzisi nokungabekezelelani. Abanye bakuthola kuyinkimbinkimbi ukuba amalungu ohlobo oluhleliwe lwenkolo. Kanti abanye banomuzwa wokuthi inkolo ehleliwe imane nje iyinto eyeqisayo “exhumanisa” uNkulunkulu nabakhulekeli bakhe. Lifundisani ngempela iBhayibheli ngenkolo ehleliwe?
Abangane BakaNkulunkulu Ngezikhathi Zasendulo
IBhayibheli linikeza incazelo ecacile yohlobo lokukhulekela olwaluqhutshwa yizinzalamizi zasendulo ezinjengo-Abrahama, u-Isaka noJakobe. Ngokwesibonelo, ngesinye isikhathi uNkulunkulu wathi: “Ngiye ngajwayelana [no-Abrahama] ukuze ayale amadodana akhe nendlu yakhe ngemva kwakhe ukuze bagcine indlela kaJehova ukuba benze ukulunga nokwahlulela.” (Genesise 18:19) U-Abrahama wayengumngane kaNkulunkulu futhi ngaleyo ndlela enobuhlobo obuseduze noMdali. Kodwa wayebuye amkhulekele nomndeni wakhe. Ngokufanayo, nezinye izinzalamizi ezazingabangane bakaNkulunkulu zazimkhulekela njengeqembu, ngokuvamile namalungu emindeni noma nezihlobo kuhlanganise nezinceku zazo.
Ngokuhamba kwesikhathi, uNkulunkulu wafuna ukuba ama-Israyeli asendulo futhi kamuva namaKristu ekhulu lokuqala ukuba abuthane ukuze amkhulekele. (Levitikusi 23:2, 4; Hebheru 10:24, 25) Lezo zikhathi ezazihlelelwe ukukhulekela zazihlanganisa ukucula, ukufunda imiBhalo nomthandazo owenzelwa iningi. (Nehemiya 8:1-8; Kolose 3:16) ImiBhalo ibonisa nokuthi iqembu lamadoda afanelekayo lalihola ibandla ekukhulekeleni.—1 Thimothewu 3:1-10.
Izinzuzo Zokukhulekela Njengebandla
Ngokusekelwe kulezi zindlela ezingokomBhalo, kunengqondo ukuphetha ngokuthi nanamuhla uNkulunkulu angalindela ukuba abangane bakhe bamkhulekele ngendlela ehlelekile. Kunezinzuzo ukukhulekela uNkulunkulu njengebandla.
Ngokwesibonelo, imiBhalo ifanisa umkhulekeli weqiniso nomuntu ohamba endleleni enyinyekile; kwesinye isimo imfanise nomgijimi osemncintiswaneni. (Mathewu 7:14; 1 Korinte 9:24-27) Uma egijima ibanga elide elikhathazayo endaweni emazombezombe, umgijimi angase akhathale ngokushesha futhi agcine ngokuphonsa ithawula. Kodwa, ngokuvamile umgijimi angabekezela futhi enze nokwengeziwe uma esekelwa abanye. Ngokufanayo, umuntu oziphaphamele izinto ezingokomoya angabulondoloza ngokuphumelelayo ubuhlobo bakhe noNkulunkulu naphezu kwezinselele, uma nje ekhuthazwa abanye abakhulekeli.
Lokhu kuwachaza kahle amazwi atholakala eBhayibhelini, kweyamaHebheru 10:24, 25, ethi: “Masicabangelane ukuze sivuselelane uthando nemisebenzi emihle, singakuyeki ukuhlangana kwethu ndawonye.” Empeleni, imiBhalo ithi abakhulekeli beqiniso babeyokhulekela ndawonye njengabafowabo nodadewabo, bemunye njengomzimba ongokomfanekiso.
Ingabe kufanele uzilahle zonke izinkolo ezihleliwe?
IBhayibheli lichaza umzimba, noma ibandla, njengelihlanganiswa isibopho sothando nokuthula. Ngokwesibonelo, eyabase-Efesu 4:2, 3 inxusa abakhulekeli ukuba baziphathe ‘ngokuthobeka kwengqondo okuphelele nobumnene, ngokubekezela, babekezelelane ngothando, bazame ngenkuthalo ukugcina ubunye bomoya esibophweni esihlanganisayo sokuthula.’ Ungaphila kanjani ngokuvumelana nalesi siqondiso uma ubungazihlanganisi nabanye abakhulekeli?
Kuyintando kaNkulunkulu ukuba abakhulekeli beqiniso babe munye okholweni kunokuba babe inhlangano yabantu abangokomoya abazikhulekela bengabodwa. IBhayibheli likhuthaza abakhulekeli ukuba bakhulume ngokuvumelana, bagweme ukwahlukana, futhi ‘bahlangane ngokufanele emqondweni ofanayo nasendleleni efanayo yokucabanga.’ (1 Korinte 1:10) Lawo mazwi abeyoba angenangqondo ukube uNkulunkulu ubefuna abantu bamkhulekele ngabanye bangahlangani.
Kuyacaca ukuthi ubufakazi obuvela eBhayibhelini bubonisa ukuthi inkolo ehleliwe iwuhlobo lokukhulekela olwamukelekayo kuNkulunkulu. Inkolo ehleliwe echazwa imiBhalo nefunwa uNkulunkulu, ingakusiza ukuba wanelise izidingo zakho ezingokomoya ngempumelelo.—Mathewu 5:3.
Kuyavunywa ukuthi ziningi izinkolo ezihleliwe namuhla ezinecala lobuzenzisi nobudlova obuningi. Kodwa lokhu akusho ukuthi kufanele silahle zonke izinkolo ezihleliwe. Kumelwe kube nenkolo emhlabeni ehlelelwe ukubonisa uthando kubo bonke abantu—inkolo ehlelelwe ukufundisa abanye ngezimiso zikaNkulunkulu zokuziphatha. Leyo nkolo ehleliwe ingakusiza ukuba wakhe ukholo lwangempela. IBhayibheli linikeza izinto ozidingayo ezingakusiza ubone uhlobo lwenkolo ehleliwe olwamukelekayo kuNkulunkulu.
Ingabe iBhayibheli liyasinikeza isibonelo senkolo ehleliwe?—Levitikusi 23:2, 4.
Iyiphi inzuzo eyodwa ebalulekile yokukhulekela uNkulunkulu njengengxenye yebandla?—Hebheru 10:24, 25.
Isiphi isibopho esihlanganisayo esenza abantu babuthanele ekukhulekeleni okuhleliwe?—Efesu 4:2, 3.
Lithini IBhayibheli Ngenkolo?
IBhayibheli liyachaza ukuthi kungani kunezinkolo eziningi kangaka.
Thumelela Thumelela Ingabe Uyakudinga Ukuba Senkolweni Ehleliwe?
Ingabe Inkolo Isungulwe Abantu?